प्यारो छोरा !
आजकाल मलाई दिन पनि दिन जस्तो लाग्दैन ।रात पनि रात जस्तो लाग्दैन । म आफुलाई आफु जस्तो पनि लाग्दैन । मन बहलाउन खोज्छु ।बहलाउनुको सट्टा बहकिन पो खोजी रहन्छ। साउने झरीजस्तै घरी घरी ।
आज म बेशी फाँटको खरबारी छेउमा निर्जीव ठिङ्ग उभिएको खयरको बुढो रुखजस्तै भाको छु। बोक्राहरु चुइटीएर अग्रास मात्रा रहे जस्तै ।आज म जिन्दगीको अन्तिम पृष्ठतिर छु। जिन्दगीको प्रत्येक पानाको अघिल्लो पृष्ठ गाह्रो महशुश हुनेगरी शब्दहरुले रङ्‌गाएको छु।
पछाडीको प्रत्येक पृष्ट त्यसै छाडेको छु। सायद त्यसो गर्नु मेरो जिन्दगीको नियति नै बनी दियो । हो छोरा तिमी हाम्रो लागि ज्यादति नै बनी दियो ।
हाम्रो आयु कति नै थियो र? गन्नको लागि केही अङ्क नै पर्याप्त थियो । निभ्न र डुब्न थोरै समय नै काफी थियो । मैले जीवनमा यति धेरै चाहाना गरिन छोरा । तिमी हाम्रो घरमा एउटा अमूल्य उपहार बनेर आएको दिनदेखि । तिम्रो चाहाना मैले सधै मेरो चाहाना बनाएँ । जीवनको उर्जाशील समय तिमीमा नै खनाएँ । तिम्रो आमाले पनि ।
तिमी भरिदै गयौं । हामी रित्तिदै गयौं । तिमी आज भरिलो छौं । हरियाली बेशीको फाँटजस्तै । मलाई धेरै खुसी लाग्छ छोरा । तिम्रो लोभ लाग्दो जिन्दगी देखेर ।तिम्रो आमालाई पनि त्यस्तै लाग्दो हो। अनि खुसी पनि हुदी हो।
ठ्याक्कै पाँच वर्ष भएछ मैले घर छोडेको । र जिन्दगीलाई बद्धाश्रममा बहलाउन सिकेको पनि ।शरीर यहाँ रहेता पनि मन त्यहाँ छ छोरा । जहाँ मैले र तिम्रो आमाले तिम्रो सुनौलो भविष्य बनाउन दशकौं जिन्दगी खर्च गरेका थियौ ।आजभोलि मलाई तिम्रो आमाको बेशी याद आउछ। माया पनि लगाउछ। तर पनि के गर्नु तिमीले हामीलाई मर्ने बेलामा अलग अलग बद्धाश्रममा फालिदियौँ ।मैले त्यति बेला तिम्रोसामु कति याचना गरे। हामीलाई यही घरमा जिन्दगीको अन्तिम पलहरु बिताउन देऊ भनेर । यही घरमा मर्न पनि ।तर तिमीले सुनेनौं । हो त्यही दिनदेखि मेरो मन भाँचियो ।मुटु कुदियो ।सायद मन भाचिएपछि नाताको डोरी पनि चुडिदो रहेछ। नाताको चुडिएको आधा डोरी लिएर तिमीले भने बमोजिम हामी जान त्यति बेला मञ्जुर भयौं । सायद मलाई भन्दा तिम्रो आमालाई गाह्रो भएको थियो । तिमीहरुलाई छोड्न । त्यति बेला उनी रोएको म अझै सम्झन्छु ।त्यसरी त मैले उनीलाई जिन्दगीभर रुवाउनेस्थिति बनाएको थिइन । तर आज आफ्नै छोराले बनाए । त्यसैले मैले उनको आशु पुछ्‌न पनि आँट गरिन। पुछिन पनि ।तर मेरो सुख्खा आखाहरु भने रसाउन प्रयास गरिरहे ।मलाई थाहा थियो । त्यो क्षण हामी सबैको लागि अन्तिम थियो ।पछि भेट्‌र्छौं कि भेटिदैनौं थाहा थिएन । त्यसैले मैले तिमीलाई धेरै बेर हेरे । नाती ,बुहारी र तिम्रो आमालाई पनि हेरे। र नमिठो सम्झना मुटुभरि बोकेर लागे जिन्दगीको नयां घरतिर ।सायद यो मेरो जिन्दगी अन्तिम परीक्षा थियो ।
पाँचै वर्ष भयो छोरा तिम्रो आमासंग पनि भेट नभएको ।मलाई तिमीहरु सबैको याद आउँछ। वेशी तिम्रो आमाको चिन्ता लाग्छ। हो छोरा तिमीले मलाई बृद्धाश्रममा पठाएपनि आमालाई संगै राखिदिएको भए पनि मलाई तिमीप्रति केही गुनासो हुने थिएन ।किन भने एउटा छोराको जन्म एउटा बलात्कृत आमाले पनि दिन सक्छे । त्यसमा बलात्कारीको के योगदान हुन्छ? यो एउटा अलग विषय हो। तर बलात्कृत आमाको कोखबाट जन्मिएको छोरा र श्रीमान् श्रीमती दुवैको इच्छाबाट जन्मिएको छोरा जन्माउदाको प्रसव पिडा एउटै हुन्छ आमाहरुलाई । हो छोरा तिमीलाई नौ महिना कोखमा राखेर तिमी जन्मिनु भन्दा अगाडी तिम्रो आमाले भोगेको बीस घण्टाको प्रशव पिडाको साँची कर्ता तिम्रो बाँऊ पनि हो।तिमीले बिहे गरेर बुहारीले नाती जन्माए पछि सात वर्षको छोरालाई तिमीले कहिले काँही भन्यौनी । मेरो छोरा तिमीले यो ड्‌याडीलाई मायाँ गर या नगर तिम्रो आमालाई जीवनको अन्तिम पलहरुसम्म माया गर । हेला पनि कहिल्यै नगर ।तिमीले आमालाई आमा मर्ने बेलामा पनि माया नै मायांको महशुस हुनेगरि खुसी बनाउन सक्नुपर्छ । हो मेरो छोरा तिमीले तिम्रो छोरालाई संधै आमालाई मायाँ गर्न सिकायौं । नढाटेर भन त छोरा l
तिमीले तिम्रो आमालाई साच्चै मायाँ गर्‍यौं र ?
उही तिम्रो सधै भेलो चिताउने बाबा
कविता : हनुमान
आर्यघाटमा जन्मोत्सव !
राम लामाको 'पिल्सिएको परदेशी मन' लोकार्पण
विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवको अन्तर्य : भाषिक, साहि...
सक्रीय सार्क सबैको हितमा
साग प्रतियोगिता : सुटिङमा भारतलाई १८ स्वर्ण
नेपाली सेनाले भ्रमण वर्षमा विदेशी सेनालाई नेपाल घुमाउने
भोलि जोर नम्बर मात्र चल्ने पाउने, ट्राफिकले भन्यो– रंगशाला आसपासमा सवारी नचलाउनू
साग महिला फूटबलमा नेपाल रजत पदकमा सीमित, भारत फेरि बाधक बन्दा प्रशिक्षक खड्काले दिए राजीनामा
सोनी, जी र कलर्स च्यानलको अवैध प्रसारण रोकिने, कारवाहीको दायरामा ल्याइँदै
भारतीय राजदूत पुरीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग गरे बिदाइ भेट
बक्सिङमा नेपालाई सफलता : मिनु गुरुङले जितिन् स्वर्ण